ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အိုဘားမားတို့ မီဒီယာတွေကို ပြောကြားချက် (ရုပ်သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အိုဘားမားတို့ မီဒီယာတွေကို ပြောကြားချက် (ရုပ်သံ)
Thank you for posting this media briefing of President Obama and Daw Aung San Suu Kyi at the White House of Yangon.
I am delighted to learn that President Obama praises Daw Aung San Suu Kyi and supports the recent reformed processes in Myanmar.
ဘင်္ဂလီကို လက်ခံဖို့ တိုက်တွန်းတာ တော့ လုံးဝလက်မခံ နိုင်ပါ မင်းပေးမဲ့ အကူအညီလဲမရချင်နေပါစေ
ဒေါ်စုပုံ က ပျာနေသလိုဘဲ
အကောင်းမြင်မှ အမြင်ကောင်းမှာပါ အကြံပြုတာနှော်
လူတွေမရိုးသားပုံများ အခု အိုဘားမားနဲ့ ဦးသိန်းစိန် စကားပြောပုံပဲကြည့်။ အိုဘားမား ဖြင့် မျက်နှာကိုမော့လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစကားပြောနေလိုက်တာ။ ဦးသိန်းစိန် ခင်မျာ အိမ်မှာကတဲ့က အလွတ်ကျက်လာတဲ့ စကားတွေကို မမေ့အောင် မနဲထိန်းပြောနေတာလား အိုဘားမားကို ထိပ်တိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားမပြောရဲလောက်အောင် အတွင်းစိတ်မရိုးသား မဖြောင့်မှန်လို့ပဲလားတော့ မသိဘူး ခေါင်းကြီးငုတ်ပြီး ၀ူးတူးဝါးတားနဲ့ ပြောနေလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လဲ ကိုလဲ သမ္မတပဲ လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ပြောပေါ့ အခုတော့....။ ပြောချင်တာ အဲတာပဲ မရိုးသားသူနဲ့ ရိုးသားသူဆိုတာ အဲလို လူရှေ့စကားပြောရတဲ့အခါကျရင် ရူးသလို အ သလိုလုပ်နေတတ်တာပေါ့။
လူတွေရွေးတဲ့ သမ္မတနဲ့ခွေးတွေကိုယ်ဟာကိုယ် မဲလိမ်ပြီးလုပ်တဲ့ သမ္မတ ကွာတာလေကွာ။